कसरी रोगमुक्त जीवन विताउने ? -योहोखबर
कसरी रोगमुक्त जीवन विताउने ?
काठमाडौं - प्रकृतिमा कति धेरै खानेकुरा छन्, जसले हामीलाई निरोगी र तन्दुरुस्त जीवन बाँच्न सघाउँछ । तर, त्यसलाई पन्छाउँदै हामी स्वादको पछाडि लाग्छौं । शरीरले यस्ता खानेकुरा थेग्न सक्दैन । भित्री अंगहरुको कार्य संचालनमा अवरोध पुग्छ । हामी रोगी हुन्छौं ।
हामी रोगी हुनुमा जसरी हाम्रो हात छ, उसैगरी रोगमुक्त हुनका लागि पनि हाम्रै प्रयास अनिवार्य छ । यदी हामी स्वस्थ्य जीवनयापन गर्ने हो, पोषिलो र स्वस्थ्यवर्द्धक खानेकुरा खाने हो भने, सक्रिय जीवन विताउने हो भने, सन्तुलित दिनचर्या पालना गर्ने हो भने हामी कसरी रोगी हुन्छौ ?
जीवन अनमोल धन हो । जीवनभन्दा ठूलो अर्को धन छैन भन्ने हामी जान्दछौं । तर, जीवनलाई धरापमा राखेर भौतिक सुखको मोहमा दौडदा दौडदै हामी दुखको तलाउमा फस्न पुग्छौं ।
जीवनलाई सुखमय, सन्तुष्ट, स्वस्थ्य, सन्तुलित राख्नका लागि हामी आफैले प्रयास गर्नुपर्छ । यसका लागि जीवनको महत्व र मूल्यलाई बुझ्नुपर्छ ।
रोगको स्रोत हामी आफै
हामीलाई रोगले दुख दिन्छ । अहिले हामी कुनै न कुनै किसिमको रोगबाट पीडित छौं । रोगकै कारण हामीले भनेजस्तो खान पाएका छैनौं, भनेजस्तो गर्न पाएका छैनौं । तर, यी रोग हामीलाई कसले दिएको हो ? कुनै सत्रुले रु कुनै पराइले ? कुनै आफन्तले ?
हामीभित्र जुन रोग छ, त्यसको खास कारण हामी नै हौ । हिजोको दिनमा हामीले खाएका खराब खानपान, हामीले अंगालेका खराब जीवनशैलीले आज हामी रोगी भएका छौं ।
३० दिन अघि २०७७ बैशाख १२ ०८:११ मा प्रकाशित